နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ ခန့်ထားခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက် - Logistics Guide
၁။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ များ၏ ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့် ရရှိထား သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ နှင့် အကြံပေးများအဖြစ် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူ များအား ခန့်ထားရန်အတွက် ပုံစံ(၁၂) ဖြင့် တင်ပြလာပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ ၂၀၆ တို့အရ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ ၂၀၆ တွင် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူ ခန့်ထားရာ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် ဘွဲ့လက်မှတ် အထောက် အထားကို ပူးတွဲတင်ပြရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း အချို့ကုမ္ပဏီများသည် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် ဘွဲ့လက်မှတ်အထောက်အထားအစား ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် မိခင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့အား ပူးတွဲ၍ တင်ပြလျှောက်ထားလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနည်း ဥပဒေ ၂၀၆ တို့နှင့်အညီ အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား၏ ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူ (ဘာသာပြန်ရန် လိုအပ်ပါက နိုတြီမူရင်း) သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြလာသည့် လျှောက်ထားလွှာများကိုသာ စိစစ်၍ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် အကြံပေးများ အဖြစ် ခန့်ထားခွင့် ၆ လ ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား ခန့်ထားခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
1. For the appointment of foreign experts form companies with permit or endorsement of MIC and State/Region Investment Committees, MIC Scrutinizes Form-12 and approves in accordance with section 51 of the Myanmar Investment Law and Myanmar Investment Rule 206.
2. Myanmar Investment Rule 206 prescribed that if the investors desire to appoint foreigners as senior manager, technical and operational expert or adviser according to section 51 (a) of the Law, the investors shall submit application attached with expertise evidence or degree certificate and profile to the Commission Office for approval. However, companies submit only its director or parent company recommendation as the expertise evidence rather than degree or certificates.
3. Hence, MIC would like to announce that MIC shall approve the 6-month appointment of foreigners as senior manager, technical and operational expert or adviser, only for those who can submit the expertise evidences with copy of degree or vocational certificates (original notarized documents for translation) relevant with the nature of business in accordance with the section 51 (a) of Myanmar Investment Law and rule 206, and MIC may reject the applications which do not meet the aforesaid criteria.